6 Tips Kuti Kudzivisa Date iroro First Kubva Being Your Last
First mazuva. Tinotarisira nomwoyo wose mashiripiti nguva. Vanogona kuva kunakidza, asi kuvhundutsira. Munzira dzakawanda, zvavari chaienzana basa kubvunzurudzwa. ace, uye unogona kutarisira perks ramangwana, incentives, uye pakupedzisira ushambadzi. (Uye ngationei tariro yakanaka "unongotaura yokudzokorora".)
Pane rimwe divi, kupfeka isiri mukonde, kutaurirana awkwardly, kana sokuti rushaikwe pakati dzinokosha evanhu Nyasha dzemutendi, uye unogona kukanganwa adanwa shure kuenda mberi.
Uye ngationei kutarisana nazvo: makwikwi inogona rune mbiri nhandare.
Heano 6 Miitiro uchaita kuda kutevedzera sezvo "Standard Operating Dzokuvhiyiwa" nokuti-kukosha zvose kutanga musi.
1. Isa rutsoka rwako zvakanaka mberi.
Iva nenguva. Dress yekubudirira. Usazviomesera foni pasi Achiputira. Hapana chinogona kuva anonetsa kana kunogumbura kupfuura kuva foni kuenda kure nguva munguva kudya. Kana iwe unofanira kutora kudanwa kubva munhu, (nekuti zvakakosha) edza kuti pfupi– ruregero.
Yeuka kuti "Haumbomuki mukana wechipiri kuti kuororwa."
2. Iva muteereri akanaka.
Ino haisi nguva yokuti dzatsatsa chingwa uye kukurukura.
Kufarira pakuziva mumwe munhu. Share chinhu kana vaviri pamusoro pezvauri uye chii unonzwa anokuitai kwzvo iwe. Dzivisa mibvunzo intrusive.
3. Nguva dzose kuva rakakodzera.
yeuka, chinangwa pano kumira panze zvakanaka.
Regai rant pamusoro kare kwakakundikana ukama, udza kure mavara majee, kana vazvibate vachizviitira basa vanopa. Zvinogona kuti imi muuye mhiri sezvo uncouth.
4. Nyatsoteerera mutauro muviri.
Maizviziva here kuti 93% vangakurukurirana anonzi non-kutukana?
Zvinhu zvakafanana mamiriro, chiso, ziso kuonana uye muviri Positioning kunogona kukubatsira kuongorora kana kufambidzana kwenyu kuroorana uye vanofarira, kana vachitarisira zvauchasangana kurasikirwa nhamba yavo. Kuteerera zviratidzo.
5. Musaenda "Dutch!"
Finance harimbofaniri kuuya musi wokutanga asati dzorudo. Uye cheapness chinhu zvachose vanhu vakawanda. Kana uri mari akadenha, kuva rokusika; funga munhu chinonaka musha cooked pamwe chekenduru nemimhanzi.
6. Kupera pamusoro Tingaona zvichikurudzira kucherechedza.
nenyasha. Kudai waiva nguva yakanaka, Unoreva. Migumo inongova chinokosha zvakafanana inotanga.
Tevera izvi panguva yakakodzera nhanhatu mazano kuti kutanga musi zvazvingava yako yokutanga!
Zviri chete kungava kutanga chinhu chinokosha.
© Copyright 2017 Date My Pet. yaakaita kubudikidza 8celerate Studio
kakawandisa vakaroorana matsva overthink zuva ravo rokutanga. Ivo kuridza mienzaniso yakasiyana-siyana pamisoro yavo pamusoro chii Tingangonyanya ...